जापानमा अध्ययनको लागी आएकी सबीना महर्जन कहाँ लापता भइन !!! – Complete Nepali News Portal
जापानमा अध्ययनको लागी आएकी सबीना महर्जन कहाँ लापता भइन !!!
May 11, 2017	1,103 Views
स्कटनेपाल ११ मे २०१७, सम्माननीय राजदूत ज्यु म एक हजुरकै जापानवासी नेपाली चेली ईन्दु गौतमको तर्फ देखी स-सम्मान पुर्वक हजुरलाई नमस्कार गर्न चाहन्छु ।
केही महीना पहीले जापानमा अध्ययनको लागी आएकी सबीना महर्जन लापत्ता भएको समाचार सुनेकी थीए तर एेलेसम्म उनको अवस्था बारे अनभिज्ञ भएको कारणले गर्दा यो पत्र लेख्न बाध्य भएकी छु । बाकी भिडियोमा सुन्नुहोस आफ्नो कमेन्ट तल लेख्नुहोला ……
Writer : Indu Gautam Japan
Vocal : Tika Adhikari (UK)